Antenimieram-pirenena : Nankatoavin’ny depiote fanindroany ny ZES -
AccueilSongandinaAntenimieram-pirenena : Nankatoavin’ny depiote fanindroany ny ZES
05/04/2018 admintriatra Songandina 0
Raha efa nankatoavin’ny parlemantera teny amin’ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny “Zones économiques spéciales” na ZES, dia notsipahin’ny teny amin’ny antenimieran-doholona izany, ary naverina nohitsiana sy nolaniana indray. Tsiahivina fa ny 8 novambra 2017 izany no efa nalefa teny amin’ny Antenimieram-pirenena.
Noho izay indrindra, mbola naverina nodinihina sy nolanian’ireo solombavambahoaka indray izany nandritra ny fivoriambe tsy ara-potoana fanintelony teo. Araka izany, lany sy nahazo fankatoavana fanindroany teny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna mikasika ny ZES. Na izany aza anefa, miandry ny fandanian’ny eny amin’ny antenimieran-doholona indray izany mialohan’ny fampiharana sy fametrahana azy. Voalaza fa lalàna miisa 13 no mandrafitra ilay volavolan-dalàna mikasika ny ZES.
Marihina mantsy fa anisan’ireo tetikasa hoenti-mampandroso an’i Madagasikara ny ZES, ary nitondran’ny teo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) fanazavana fa tafiditra amin’izany ny fampananan’asa sy famoronan’asa, ny fampiofanana arak’asa, sns.
Noho izany, anisan’ny tetikasa goavana hoentin’ny Fitondrana hampihenana ny tsy fananan’asa eto amin’ny firenena izany, ary fampisondrotana ny toekarem-pirenena. Milaza mazava tsara mantsy ny lalàna ao anatin’ny ZES fa ny 90%-n’ny mpiasa dia tsy maintsy teratany malagasy avokoa.
Raha ny fanazavana ihany, dia manodidina ny 100 ha eo ho eo ny velaran-tany ilaina amin’ny fananganana ozinina, sekoly, biraom-panjakana ary hopitaly, sns. Ny famatsiam-bola amin’izany tetikasa izany kosa no hiteraka sy hampiteraka asa, izay hitondra an’i Madagasikara amin’ny fisandratana ara-toekarena. Fa eo ihany koa ny fikatsahana ny fahaleovanten’ny firenena ara-toekarena amin’ny alalan’io tetikasa ZES io. Voalaza fa ny velaran-tany hampiasain’ireo mpamatsy vola dia an’ny Fanjakana, ary manana 30 taona izy ireo hanatanterahany ny tetikasany hampandrosoana, sns.
Ho famaranana ny fankalazana ny jobily faha-150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy faha-500 taonan’ny Reformasiona dia tonga niara-niombom-bavaka tamin’ireo mpino kristianina avy ao amin’ny fiangonana Loterana tonga maro be teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Filoham-pirenena ...Tohiny